Bililiqada Iyo Boobka Ka Socda Koonfur Africa Ma Si Qorsoodi Ah Ayaa Loo Qorsheeyay – Borama News Network
Bililiqada Iyo Boobka Ka Socda Koonfur Africa Ma Si Qorsoodi Ah Ayaa Loo Qorsheeyay
Dadka qaarkood ayaa qaba in dhacdooyinka usbuucii la soo dhaafay ay ahayeen “xilliyadii ugu madoobaa” ee dimuqraadiyadda Koonfur Afrika.
Arrintan ayaa waxay ka dambeysay caro ka dhalatay kadibmarkii la xiray madaxweynihi hore Jacob Zuma? Dadka wax falanqeya ayaa sheegaya in arrintan ay ka dambeysay koox daahson oo ka laxawsaday xiritaanka madaxweynaha kuwaas oo Zuma saaxib la ah.
Sidookale waxaa isbedelay qaabka ya dowladda u hadasho. Maalmihi ugu horeeyay ee rabshaduhu ay socdeen dowladda waa ay amusnayd iyadoo markii dambe sheegtay in waxa socdo ay yihiin cunaqabatyn dhaqaale ama dagaal ka dhan ah dhaqaalah dalkaasi. Dadka siyaasada darsa ayaa falanqeyntooda meel sare gaarsiyay oo waxay sheegen in rabshadahan ay wataan astaamaha ”afgembi” ama ”kacaan”.
Madaxweyne Cyril Ramaphosa wuxuu sheegay in rabshadaha ay ahaayeen kuwo horay loo sii qorsheeyay, laakiin ma uusan sheegin cidda uu ku tuhmayo inay ka dambeyso.
Ferial Haffajee, oo ah tifaftiraha wargayska Daily Maverick, ayaa wax ka qoray istiraatiijiyad isku dubaridan ee rabshadaha Koonfur Afrika ka dhacay isbuuci hore, waxaa uuna sheegay inay maleegeen dad ka ag dhowaa madaxweynihii hore.
Waxaa uu soo xigtay iloo wareedyo sarsare eek a tirsan xisbiga talada dalkaasi haya ee ANC iyo hay’adaha sirdoonka dalkaasi, Haffajee waxaa uu cabiray qorshaha rabshadaha sida in lagubo gawaarida xamuulka ee gobolka KwaZulu-Natal iyo in la xiro wadooyinka muhiimka ee aadayo magaala xeebedka Durban iyo xaruu nta halbowlaha u ah dhaqaalaha dalka Koonfur Afrika ee,Gauteng. Tallaabadan ayaa lagu doonayay in waxyeelo loo geeystayo dhaqaalaha kala daadssan ee dalkaasi iyo Dowladda Madaxweyne Ramaphosa.
Qorshahan ayaa la amminsanyahay in ay qayb ka yihin xubno ka tirsan xisbiga talada haya ee ANC iyo hay’addaha mukhaabaradka dalkaasi.
Waxaa jiro laba kooxod oo xisbiga ANC ka tirsan ee iska soo horjeeda. Koox waxa ahogaaminaya Madaxweyne Ramaphosa, oo taagerayashisu ay amminsanyihin in dib uu usoo dhisayo Hay’addaha dowladda oo lala xisaabtamayo kadib tooban sano oo musuq iyo boob loo geysto hantida dadweynaha ee xukumadii Madaxweynihi hore ee dalkaasi Zuma. Kooxda kale ayaa loo yaqana RET, waa koox daacad u ah Madaxweynihi hore, waxay mushaaxi jireen oo ay maamulan jireen dowladii hore haatan waxay daremayan in la caburiyay. Waxay doonayan in isbedel la sameeyo sida ugu dhaqsiyaha badan si ay danahooda uga gun gaaran hadii Madaxweynaha hadda talada haya la gilgilo.
Jacob Zuma waxaa uu ahaa sirdoonka fahamsan dhanwalba ee gudaha iyo banaanka xisbiga ANC xilligii midab takoorka ee cadaanka talada hayay koonfur Afrika, waxaa uuna si xoogleh awooda ugu soo laabtay sandkii 1990-kii. Afar sano kadib markii uu xilka baneyay ayaa wxaa la amminsanyahay in Zuma uu saaxibo iyo dad daacad u ah ku dhex leeyahay hay’adaha sirdoonka dalkaasi.
Arrintan ayaan ahayn mid layaab ah waayo, xilligii uu talada dalkaasi hayay ayaa wxaaa la sheegay in dhaqalo badan dhankaasi loo weeciyay, xaqiiqdii guddigii baarayay musuqa Zuma ayaa sheegay in uu as’asay waxyo kala duwan oo sirdoon kuwaas oo dhaqan gelinayay dalaabakada madaxweynaha.
Dadka Zuma ka agdhaw ama taagerayashiisu ayaa eedeyntan waxba kama jiran kasoo qaaday waxayna sheegen in eedeymahan ay yihiin kuwo siyaasadeysan islamarkaana la doonayo in lagu ceeb qariyo dowladda hataan xukunka hayso oo ku guuldareysatay inay shacabkeeda ama dadka masaakiinta ah ay u adeegto.
Hasee ahaate qaabka dowladda ay uga falcelisay rabshadaha dhawaan dhacay ayaa ah mid soo daahday iyadoo loo fasiran kara mid ammniga lagu sugayo iyo mid riwaayad ahba.
Sababta sidaasi loogu fasirtay ayaa la sheegay inay tahay, in ku dhawaaqista dowladda ee in 25 kun oo ciidan milatari ah ay xasiloonida ka shaqeyn doonan muddo saddex billood ay tahay tiradii ugu badnayd ee milatari ee taarikhda koonfur Afrika, sikale hadii loo dhigan waa tiradii ugu badnayd tan iyo wixii ka dambeyay midab takoorka dalkaasi.
Hase ahaate, shir dhawaan ay yeeshen saraakiisha ammniga dalkaasi ayaa waaxda difaaca ee dalkaasi waxay shacabka koonfur afrika xusuusisay in milatariga shaqadooda aysan ahayn in ay soo celiyaan kala dambeynta taasina ay tahay shaqada booliska dalkaasi.
Madaxwayne Muuse Biixi Oo Maanta Salaada Ciida La Tukaday Shacabka Hargeysa Qudbadna U Jeediyay
Wasiir Saajin Oo Reer Borama Si Adag Ugu Canaantay Calanka Somaliya
“Farmaajo Waa Astaanta Qaranka Cabdi Xaashina Waa Hoggaamiye Mucaarad Ah Lana Shaqeysta Mucaaradka” Mahdi Guuleed
Bnnstaff Bnnstaff January 21, 2021
Xisbiga Wadani Oo Xaal Ka Bixiyay Hadal Maanta Ka Soo Yeedhay Xoghayaha Arimaha Gudaha Ee Xisbigaasi